Intel invents Optical tariby iray izay mampanantena 1.6Tbps - News Fitsipika
Intel invents Optical tariby iray izay mampanantena 1.6Tbps
CHIPMAKER Intel efa lasa ny 800Gbps Optical tariby fa hoy hanatitra goavana mitombo ny hafainganam-pandeha sy ny angon-drakitra supercomputers foibe rehefa ao no nanomboka ny tapany faharoa ny taona.
Amin'ny nanambara ny vokatra amin'ny Optical Fibre Conference in San Francisco, Intel nilaza fa dia mifototra amin'ny silisiôma ny photonics interconnect teknolojia, ary manana ny fanohanan'ny maro mpilalao ao amin'ny orinasa Optical, anisan'izany Corning, US Conec, TE fifandraisana, Molex sy ny hafa.
Miantso azy io ny chipmaker MXC connector teknolojia, izay natao ho toy ny vola-Optical interconnect mahomby ao anatin'ny angona foibe.
MXC, Intel izay nanomboka tamin'ny taon-dasa, dia voalamina tsara interconnect izay manohana hatramin'ny 64 kofehy, samy mitondra hatramin'ny 25Gbps ny tahirin-kevitra ho tanteraka 1.6Tbps passante ny lavitra hatramin'ny 300m. Nisy nanjary amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Corning, izay manome ny Clearcurve Optical fibre natao ho Nanenjana manodidina matahotra ianao noho ny nentim-paharazana miolakolaka kofehy.
Ny teknolojia Intel dia ampahany amin'ny taranaka manaraka antontan-kevitra foibe fandraisana andraikitra antsoina hoe fitoeran'entana Scale Architecture, izay mikendry ny disaggregate lohamilina tsirairay ho farihy ny compute, fitehirizana sy ny fahatsiarovana amin'ny fitoeran'entana anivon'ny, amin'ny silisiôma photonics ampiasaina amin'ny fifandraisana na tao anatiny sy eo racks.
Ao anaty lahatsoratra iray ao amin'ny Intel ny Data stack bilaogy, ny mafy ihany koa ny voalaza fa Microsoft efa manaiky ny MXC Adopters Forum.
Microsoft ny ankapobeny mpitantana ny Cloud Server Engineering, ihany Kushagra, nilaza fa ny teknolojia MXC dia ho “Zavatra” amin'ny famolavolana taranaka manaraka avo-performance data foibe Architectures.
“Tsy andrintsika ny miara-miasa amin'ny Intel sy fitsipika misokatra vatana toy ny OCP mba hanafainganana ny fizarana vaovao-fananganan-jaza sy ny orinasa,” hoy izy:.
Ny tena fampiasana for MXC telegrama tranga ahitana fifandraisana haingana eo ambony-of-fitoeran'entana Switches sy ny fototra Switches, ary mampifandray lohamilina ho fanampiny fitehirizana na GPUs, Intel hoy.
21628	0 Clearcurve, Corning, Data foibe, Intel, Microsoft, Molex, MXC, TE fifandraisana
← 20 Mahomby Home fikarohana onitra Fa nivonto Feet Six Indian sambo Naparitaka amin'ny fikarohana ho an'ny Maleziana fiaramanidina →